Maddaxweynaha Dowlada Federalka somaliyeed oo si diiran logu soo dhaweeyey Dalka turkiga | Daafeet	Friday, October 21st, 2016	Home
Dec 5, 2012 - Aragtiyood	Madaxweynaha Soomaaliya Dowlada fedaralka Somaliyeed iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Turkiga. iyadoo lagu wado inay maanta kulammo la billaabaan madaxda dalkaas oo uu ugu horreeyo madaxweynaha Turkiga Cabdalla Gulltop ten best online casinos.
top casino sites ukWafdiga Madaxweeynaha ayaa markii uu ka tagay garoonka magaalada Ankara waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay madax katirsan dowladda Turkiga, Masuuliyiin ka socotay safaaradda Soomaalida dalkaasi, arday iyo dadweeyne kale oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalkaasi.
Madaxweeynaha ayaa la filayaa in maanta uu la kulmo ra’iisul wasaaraha Turkiga isagoo kala hadli doona xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo sidii loo sii wadi lahaa mashaariicda horumarineed ee dowladda Turkigu ka wado Soomaaliyatop 10 bonus casinos.
three card poker games onlineBooqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tago dal ku yaalla Qaaradda Yurub, waxaana uu ku sugnaan doonaan muddo saddex maalmood ah.